Somaliland: Wasaaradda Duulista oo soo Bandhigtay Tirada Dadka Adeegsaday Madaarka Hargeysa Sanadkan 2016-ka - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Wasaaradda Duulista oo soo Bandhigtay Tirada Dadka Adeegsaday Madaarka Hargeysa Sanadkan...
Wasaaradda Duulista hawadda iyo Gaadiidka Cirka Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa shaaca ka qaaday tirokoobka dadka rakaabka ah ee ka dhoofay ama ka soo degay madaarka Cigaal International Airport ee Hargeysa sannadkan sii galbanaya ee 2016-ka.
Maamulaha madaarka Hargeysa Mr. Maxamed Yuusuf Ismaaciil, ayaa sheegay in madaarku u adeegay sanadkan rakaabkii ugu badnaa oo uu xusay in tiradoodu dhammayd 149,918 oo qof, waxaanu xusay markii ay qiimeeyeen in rakaabkii ay u adeegeen ku qanacsanaayeen 90% adeegyada kala duwan ee madaarka looga qabtay.
Maamuluhu wuxuu sidaas ka sheegay shir sanadle ah oo ay yeeshaan shaqaalaha Madaarka Hargeysa iyo masuuliyiinta Wasaaradda Duulista iyo Hawadu, oo shalay lagu qabtay madaarka caasimada. Waxa kaloo ka qaybgalay kulankaas Wasiirka, Wasiiru-dawlaha iyo Agaasimaha guud ee Wasaaradda Duulista.
“Sanadkan waxa uu ahaa sannadkii aynu ugu rakaabka (Passenger) badneyn, uguna duulimaadyada badneyn, tirada rakaabka sanadkan ee aynu u shaqaynay waxa ay gaadhayaan 149,918 (Boqol iyo sagaal afartan kun, sagaal boqol iyo sideediyo toban qof) rakaab ayaa sanadkan ka soo degay gegida oo aynu u shaqayanay, waana markii u horaysay ee tirada intaasi le’eg ka dhoofaan kana soo degaan taariikhda madaarka,”ayuu yidhi Maamuluhu, waxaanu intaas ku daray, “Kadib markii aynu qiimaynay ee aynu eegnay awal dadkaasi marba waxbay ka caban jireen ee aynu sanduuqii soo jeedinta iyo cabashada dib u eegnay 90% (boqolkiiba sagaashan) dadka ka dhoofa kana soo dega madaarku waxa ay noqdeen rakaab ku qanacsan sida aynu u shaqaynayno, taasina waa ta keentay in la idiinka abaal mariyo la idiinkana mahadceliyo shaqadaasi fiican ee aynu soo qabanay.”
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Duulista Mr. Cumar C/laahi Aadan, ayaa isna sheegay in tirada dadka adeegsada madaarka Hargeysa ay kordhiyaan 10 illaa 20%, waxaannu yidhi, “Sanad walba dadka Somaliland soo booqanaya waa ay kordhayeen, waxaanay kordhayeen inta u dhaxaysa 10% ilaa 20%, sannad walbana waa ay kordhaan rakaabka ka soo degaya madaarku.
Waxaan bogaadinayaa shaqaalaha ka socda Laanta socdaalka Somaliland oo suurto galiyey in tahriibayaashii ka dhoofayey madaarradu ay ka joogsadaan, ciidamada ammaanka ee Milatariga iyo Booliska ayaan iyagana bogaadinayaa oo innagu halka ay xafiisyada quruxda badan ka fadhino waxay bacadka iyo dhaxanta u taagan yihiin inay diyaaradaha amnigooda ilaaliyaan.”
Wasiiru-dawlaha Wasaaradda Duulista iyo HawaDda, Axmed Nuur Faahiye, ayaa bogaadiyay shaqaalaha madaarka oo uu karti iyo adkaysi ku majeertay, waxaannu yidhi, “Waxaan aad idiinka mahadnaqayaa adkaysigiinna, kartidiinna, iyo dedaalkiinna, shaqaalaha wasaaradda duulista, gaar ahaan shaqaalaha madaarka Hargeysa.”
Wasiirka Duulista iyo Gaadiidka Hawadda Jamhuuriyadda Somaliland, Md. Farxaan Aadan Haybe, oo gabo-gabadii ka hadlay shirkan, waxa uu hawlwadeenada madaarka ugu baaqay inay dedaal muujiyaan oo aanu qof waliba isa siinin inuu shaqada uu hayo iska fadhiyayo, waxaannu yidhi, “Laba shay baan idin kula dardaarmayaa, Inaynu hiigsi yeelanno oo nin walba kaalinta uu joogo aanu is odhan halkaas ayaad fadhiyaysaa, dee waa la iskugu imanyaa. waxa laga yaabaa in Madaarkan Terminal cusub loo dhiso inaynu habkan wax ka bedalno, in ama qaabkiisa wax iska bedelaan dabadeedna la yidhaahdo maxaad taqaanaa?, oo aanay noqonin yaad taqaanaa, taasina waxay keenaysaa inad dedaashaan oo aqoontiina kobcisaan, oo akhlaaqiyaadkiina iyo himiladiina fogaysaan, oo habka aynu ula macaamilayno Dadka dhoofaya iyo kuwa inoo soo degayaba dabeecad iyo dhaqan wanaagsan aan kula dhaqanno.”
“Wax allaale iyo wixii ka reeban Madaarkanna la joojiyo, aad baan anigu ula socdaa dhaqdhaqaaqa Madaarka iyo kuwa kaleba gaar ahaana Madaarkan maalin walba warbixin baa ii timaada. maalin kasta oo aan xafiiskayga fadhiisto waxa la ii keenaa warbixin oo ama wax ka dhacaya inta badan todobaadkii waxaan soo maraa haddii aanan shaqo kale yeelan shan cisho,”ayuu yidhi Wasiirka Duulistu.
Wasiir Farxaan, waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in nidaamka shaqadda ee madaarrada wax laga bedalo, waxaannu yidhi, “Kormeekayguna waxa uu yahay indha indhayn. wax badan oo aan arkay, haddii ay tahay shaqaalaha laftiisa iyo waxyaabo badan oo toosin u baahan, anigu inta badan Hay’adaha caalamiga ah iyo kuwa maxaliga ah baan la shaqayn jiray waxay leeyihiin nidaam ay u shaqeeyaan, nidaamkuna waa waxa wax kala haga, waxa la yidhi lacag badan oo ku soo gasha waxa ka fiican adiga oo lacag yari ku soo gasho oo maarayn karaya, waxaan uga jeedaa inaynu maamulka iyo, la macaamilka tayayno waa waxay adduunyadu horumar ku gaadhayso.”
Mr. Cumar C/laahi Aadan
Mr. Maxamed Yuusuf Ismaaciil